merolagani - चौध सय रूपैयाँ शेयर मूल्य भएको कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी २ रूपैयाँ !
चौध सय रूपैयाँ शेयर मूल्य भएको कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी २ रूपैयाँ !
Nov 07, 2018 Merolagani
२५ रूपैयाँको प्रतिशेयर आम्दानी २ रूपैयाँमा झर्ने कम्पनी कुन हो ?
नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत एउटा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी २ रूपैयाँ ८९ पैसा कायम भए पछि यसका लगानीकर्ता निराश बन्ने अवस्था आएको छ । दोस्रो बजारमा १ हजार ४ सय २० रूपैयाँमा शेयर कारोबार भैरहेको कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी २५ रूपैयाँ १४ पैसाबाट २ रूपैयाँ ८९ पैसामा झरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा एनएमबि माइक्रोफाइनान्स (NMBMF) को प्रतिशेयर आम्दानीमा भारी गिरावट आएको हो ।
गत आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा प्रतिशेयर आम्दानी २५ रूपैयाँ १४ पैसा रहेको कम्पनीको यस त्रैमासमा प्रतिशेयर आम्दानी २ रूपैयाँ ८९ पैसामा सीमित छ ।
चुक्तापूँजी स्थीर रहेको कम्पनीको अन्य सञ्चालन खर्च,कर्जा नोक्शानी व्यवस्था र कर्मचारी खर्चमा भएको भारी वृद्धिले माइक्रोफार्इनान्सको नाफा १० लाख १७ हजारमा खुम्चीएको छ । गत वर्ष यसै अवधिमा कम्पनीले ८८ लाख ५४ हजार खुद नाफा कमाएको थियो ।
यसरी खुद नाफामा सुधार हुन नसकिरहेका बेला मार्इक्राेफार्इनान्सकाे खर्चकाे अाकार फराकिलाे अन्तरले बढे पछि प्रतिशेयर अाम्दानीमा अधिक संकुचन अाएकाे हाे । यसले लगानीकर्ताकाे प्रतिफल पाउने अाश मरेकाे छ । यद्दपी मार्इक्राेफार्इनान्सले जगेडा काेष मासेर केही प्रतिफल दिन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
समिक्षा अवधिमा मार्इक्रोफार्इनान्सको खराब कर्जा अनुपात १.३८ बाट बढेर २.७२ प्रतिशत पुगेको छ । कर्मचारी खर्च २ करोड ६८ लाखबाट ३ करोड ७० लाख, अन्य सञ्चालन खर्च ८५ लाखबाट १ करोड १९ लाख रूपैयाँ पुगेको छ । कर्जा नोक्शानी व्यववस्था पनि ६७ लाखबाट १ करोड २९ लाखमा पुर्याए पछि मार्इक्रोफार्इनान्सको खुद नाफा अनपेक्षित रूपमा घटेको हो ।
१४ करोड ८ लाख चुक्तापूँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा ११ करोड १३ लाख सञ्चित छ । यस अवधिमा मार्इक्रोफार्इनान्सले ७७ करोड ५४ लाख निक्षेप र १ अर्व ८५ करोड बैंकबाट सापटी लिएर २ अर्व ३७ करोड कर्जा परिचालन गरेको छ । व्यवसायको आकारमा भएको वृद्धिसंगै मार्इक्रोफार्इनान्सको ब्याज आम्दानी बढेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा ८ करोड ८२ लाख ३६ हजार रूपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको मार्इक्रोफार्इनान्सले यस पटक १० करोड ८७ लाख १७ हजार रूपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको छ । तर ब्याज खर्चमा भएको अधिक वृद्धिले खुद ब्याज आम्दानी भने झिनो अंकले मात्र बढेको छ ।
जसअनुसार गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा ४ करोड १९ लाख ३८ हजार रूपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको मार्इक्रोफार्इनान्सले यस पटक ४ करोड ४० लाख ६१ हजार रूपैयाँ मात्रै खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ ।
हालै स्थापना भएका दुई लघुवित्तको यस्तो आयो वित्तीय विवरण
प्रतिशेयर आम्दानी ११ रुपैयाँ १३ पैसा ऋणात्मक रहेको लघुवित्तको शेयरमूल्य ६५० रुपैयाँमाथि !
जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तको खुद नाफा बढ्यो, ५७ रुपैयाँ ९७ पैसा इपिएस कायम
समीट माइक्रोफाइनान्सको प्रतिशेयर आम्दानी १९ रुपैयाँ ८८ पैसाले घट्यो, इपिएस कति ?
ग्रामीण विकास लघुवित्तको नाफा एक करोडले सुधारियाे, खराब कर्जाको जोखिम बढ्याे
आर्इपिओ निष्काशनको तयारीमा रहेको गुराँस लघुवित्त नोक्सानी घटाउँदै
नाडा अटाे साे भदाै १० देखि भृकुटी मण्डपमा हुने
Aug 18, 2019 06:41 PM
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा नाडा अटो शो हुने भएको छ । यहि भदौ १० गतेदेखि शुरू हुने अटो सोमा ९५ ब्राण्डका सवारी साधन र त्यसमा प्रयोग हुने सामाग्री रहने आयोजकले बताएको छ ।
बिद्युत प्राधिकरण नाफामा गएपछि कर्मचारीलाई मालामाल, आकर्षक भत्ता याेजना
सुन्दर यातायातले भदौ दोस्रो साता देखि उपत्यकामा विद्युतीय यातायात सञ्चालनमा ल्याउने
Aug 18, 2019 06:08 PM
ट्रेजरी बिल बिक्रीबाट २ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदै राष्ट्र बैंक, सोमबार बोलकबोल
Aug 18, 2019 06:05 PM
पैँतिस प्रतिशत नेपाली अझै वित्तीय पहुँच बाहिर, कार्य क्षेत्र विस्तार गभर्नरको जोड
मुक्तिनाथ रेमिटको '७६ साल ७६ उपहार, चाडपर्वसँग खुसीको बहार’ अभियान सञ्चालन
Aug 18, 2019 05:47 PM
सुचना तथा प्रसारण विभाग द.न. ४४०/०७३/०७४ * प्रधान सम्पादक:- तिलक कोइराला * प्रकाशक - एस्ट्रिक टेक्नोलोजी प्रा.लि. * इमेल: editor@merolagani.com